မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကွန်မြူနစ် လားလားမှမဖြစ်ပါ — →
သိပ္ပံသမိုင်း၌ ဟော့ကင်းသည် အိုင်းစတိုင်း၏နေရာ အစားထိုး ရယူနိုင်စွမ်းရှိသော၊ ထင်ရှားသော
ရူပဗေဒ သဘောတရားရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ဟော့ကင်းသည် တစ်ချိန်က တွင်းမဲကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ဆိုခဲ့ဖူးသည် –
(Eventually, when the star has shrunk toacertain critical radius, the gravitational field at the surface becomes so strong that the light cones are bent inward so much that light can no longer escape.)
ကြယ်တာရာများသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ရှုံ့တွလာသောအခါ အတော်အတင့် အ၀န်းအ၀ိုင်း အတွင်းတွင် ဆွဲအားသည် လွန်စွာပြင်းထန်လှသည်။ ထိုအခါ အလင်းတို့သည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကိုင်းကျ လာတတ်သည်။ ထိုသို့ ကိုင်းကျလျှင်အလင်းသည် လွတ်မြောက် ထွက်ပြေးသွားနိုင်ခွင့် မရှိတော့ဘဲ ဆွဲဆောင်ထိမ်းချုပ်ခြင်းကို ခံရသည်။
(According to the theory of relativity, nothing can travel faster than light.)
အထွေထွေနှိုင်းရသီအိုရီအရ အလင်းထက်မည်သည့်အရာမှ မမြန်ပါဟူသောအယူ ရှိခဲ့သည်။
(.. if light cannot escape, neither can anything else; everything is dragged back by the gravitational field.)
အလင်းတောင် မလွတ်နိုင်လျှင်ကျန်သောအရာ မည်သည့်အရာမှ မလွတ်နိုင်တော့ဘဲ ဆွဲအား၏ စုပ်ယူဝါးမျိုမှုကို ခံရဖို့သာ ရှိတော့သည်။
(So one hasaset of events,aregion of space-time, from which it is not possible to escape to reachadistant observer.)
လေ့လာသူအဖို့ အလင်းဟာ မလွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်းကို သိရှိလာခဲ့ရသည်။ ဤအခါမှာ အဲဒီ မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အ၀န်းကို အခုအခါ တွင်းမဲဟု ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ကြရတာပါပဲ။
(This region is what we now callablack hole. Its boundary is called the event horizon and it coincides with the paths of light rays that just fail to escape from the black hole.)
ဟော့ကင်းသည် Black Hole ဆိုသော ကဏ္ဍတွင် အထက်ပါအတိုင်း Black Hole ဖြစ်လာပုံကို ရှင်းပြခဲ့ဖူးသည်။ အခုအခါတော့မူ Black Hole ၏အ၀န်းအ၀ိုင်းဖြစ်သော (Event Horizon) ကို သူသည် အဓိပ္ပာယ် ပြောင်း၍သတ်မှတ်ရန် ကြိုးစားလာခဲ့သည်။
ဤကား ဟောကင်း၏ စကြ၀ဠာ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၏ အဖြေရလဒ်များဖြစ်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်အများအဟြး ဝေဖန်စရာအဖြစ် တင်ပြနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့သည်ဟု သတင်းပေးရမည်သာဖြစ်သည်။
Tags: အိုင်းစတိုင်း, ဟော့ကင်း
This entry was posted in Articles and tagged အိုင်းစတိုင်း, ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.